Izindaba - Ubuchwepheshe besikhathi esizayo ngumbono obonakalayo: Ingqondo yezingane imemezele "ukubuyela esikhathini esizayo 2 ″ maglev DeLorean time car
I-Diecast Truck neTrekta ene-Trailer Model
Ubuchwepheshe besikhathi esizayo ngumbono obukwayo: Ingqondo yezingane imemezele "emuva esikhathini esizayo 2 the maglev DeLorean time car
Namuhla usuku nje olujwayelekile kubantu abaningi, kodwa lusuku olubalulekile kubalandeli be-movie yakudala "emuva esikhathini esizayo 2 ″. Namuhla usuku lapho uMarty noDkt.Brown, abalingiswa abaphambili bendaba, bebuyela kokuzayo. Ukukhumbula lolu suku, imikhiqizo eminingi eseceleni ehlobene nale filimu yethulwe ngokulandelana.
Muva nje, inkampani yamathoyizi yaseHong Kong ebizwa nge-kids logic imemezele imoto yesikhathi seDeLorean ngomphumela wokumiswa ukubuyisa indawo yama-movie yakudala imoto esizoqala ukuphuma ngayo ngesibungu. Umkhiqizo wonke uhlukaniswe ngesisekelo nemodeli yemoto yakwaDeLorean. Ngokusebenzisa umgomo wamagnetic levitation, imoto imisiwe ngaphezu kwesisekelo. Wonke umkhiqizo ubheka kakhulu i-sci-fi. Ngeshwa, lo mkhiqizo ngeke uthengiswe kuze kube yikota lesithathu lonyaka we-2016 ekuqaleni. Ngakho-ke, kusezingeni langaphambi kokuthengisa okwamanje. Uma unenhloso yokuyithenga, ungayibhuka kuwebhusayithi yezithombe e-Taiwan. Kodwa-ke, inani lentengo elisemthethweni lifinyelela kuma-dollar ayi-1600 aseHong Kong (cishe ama-yuan ayi-1310). Kufanele ucabange kahle ngaphambi kokusika izandla zakho.
Abangani ababone ifilimu bonke bayazi ukuthi le modeli isuselwa kumodeli kaDeLorean dmc-12 ku-movie yesibili yochungechunge. Lesi sikhulu sithembele ku-100% kwifilimu yokuqala maqondana nokukhiqizwa. Umnyango wephiko olungelutho, umshini wesikhathi namasondo esiqwini konke kwenziwa ukuba kube njengokuphila. Isilinganiso semodeli ngu-1: 20, ngakho-ke ubude bemodeli bungu-22 cm. Umzimba wemoto unamalambu e-LED angaphezu kwe-10, angakhipha amalambu akhanyayo futhi acwebezelayo. Ngemuva kokususa isisekelo sokumiswa kukazibuthe nokufaka imodeli ngamathayi ajwayelekile, ingakhonjiswa njengemodeli ejwayelekile yemoto.
Isixhumanisi sokuthengisa kwangaphambilini: thenga izithombe
Intengo esemthethweni: amadola ayi-1600 eHong Kong (cishe ama-yuan ayi-1310)
Ikheli: Igumbi 201, No.5 Weige Road, Shipai Town, Dongguan City, esifundazweni saseGuangdong